Mbola ho ela e !!! | NewsMada
Ny fitokonana, na koa ny fandrahonana hanao fitokonana. Izay indray izao no malaza tato ho ato. Omaly izao, nitokona sy nanao fihetsiketsehana an-dalambe ireo mpitatitra amin’ny taxibe, avy amin’ny koperativa maromaro, miasa amin’iny faritra Atsimondrano iny. Voalaza fa hoe noho ny «fanorana» sy ny antsojay lava ataon’ny polisy azy ireo no anton’ny fitokonana. Ny ankilany koa anefa, etsy andanin’izay manizingizina fa tsy manara-dalàna ny taxibe, tsy manaja ny fitsipika sy ny voalazan’ny bokin’andraikitra momba ny asan’ny mpitatitra.
Dia ahoana izany ? Iza no omen-tsiny, ary iza no omen-drariny ? Manahirana ny hiandany amin’ny andaniny sy ny ankilany. Ny mpanjifa, ny mpandeha izay iharan’ny vokatr’izany rehetra izany no aoka hitsara. Anisan’ny mampitaraina fatratra ny mpandeha, saiky isanandro izao, ohatra, ny afitsok’ireo taxibe sasany tsy tonga hatrany amin’ny fiantsonany (terminus) fa mihodina eny amin’izay tiany hihodonana eny, indrindra rehefa hariva. Misy koa ireo lazaina hoe mpanao « vodihazo », mitokona maharitra eo amin’ny « arrêt » iray, na voalaza aza fa tsy azo ijanonana maharitra eo. Ny fitondran-tena, ny loton’ny fiara sy ny mpamily sy ny resevera, tsy lazaina intsony… Tsy ara-dalàna izany !
Ary ny afitsok’ireo polisy… sasany ? Mody manakana, manome taratasy fanasaziana, maka ny taratasin’ny fiara (carte grise, permis…). Toa sarimihetsika fotsiny anefa izany. Ao aloha kely ao, minitra vitsy aorian’izay, dia miravona ny raharaha. Nahazo « saosy » e ! Dia ohatr’izay hatrany ny zava-misy ; tsy takona afenina fa hitam-poko, hitam-pirenena, ary tsy tahotra tsy henatra fa efa toy ny hoe ara-dalàna, mandeha ho azy. Toa izay miteny sy mitsikera indray aza no tsy ara-dalàna, miana-kendry, miseho « milay », araka ny fitenin’ny tanora.
Ity fanehoan-kevitry ny mpikambana iray ao amin’ny vondrona «Malagasy be ady», hita tao amin’ireny tambajotram-pifandraisana (facebook), omaly, ity no azo hamehezana azy : «… izao no alehany rehefa tsy nozarina hanara-dalàna hatramin’izay ! », hoy ilay olona, tezitra mafy. Marina ny azy ! Santionany iray ihany iny fitokonan’ny mpitatitra, omaly, iny fa maro dia maro ny endriky ny fanazarana ny olona tsy hanara-dalàna sy ny gaboraraka eto amin’ny firenena, raha tsy hilaza afa tsy ny an’ireo mpivarotra amoron-dalana, ny kolikoly amin’ny sehatra samihafa etsy sy eroa… Mbola ho ela e !